2.72.1082 အခမဲ့ DOWNLOAD BSPLAYER - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည် Microsoft Word ကိုအလုပ်လုပ်နေစဉ်တဦးတည်းထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းသို့မဟုတ်စာသားထဲမှာအခြားဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ program ကိုပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအတွေ့အကြုံရှိသုံးစွဲသူများအားကအထူးအက္ခရာများ၌ရှိသမျှသောအမြိုးမြိုးအဘို့အကြည့်ဖို့ရာအပိုင်းကိုငါသိ၏။ တစ်ခုတည်းသောပြဿနာစံကတစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်ခက်ခဲသည်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ကြောင်းဤမျှလောက်သောဤတူညီသောဇာတ်ကောင်များ၏ရပ်ကွက်သတ်မှတ်ထားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ရှာတွေ့နိုင်အောင်မလှယျကူသောဇာတ်ကောင်တစ်ဦးက box ထဲမှာတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်းမကြာခဏဒီသို့မဟုတ်ကြောင်းကို item ဖော်ပြထားခြင်းဖို့လိုအပ်သည့်စာရင်းများနှင့်မေးခွန်းများကိုအတူစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသင် box ထဲမှာတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်နေရာနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
မီနူးထဲမှာ box ထဲမှာအမှတ်အသားတစ်ခု X ကိုထည့်သွင်းခြင်း "သင်္ကေတ"
သငျသညျဇာတ်ကောင်ချင်နှင့် tab ကိုသွားပါရှိရာစာရွက်စာတမ်းအတွက် 1. နေရာညွှန်းမြား "ထည့်".
ခလုတ်ကို 2. ကိုနှိပ်ပြီး "သင်္ကေတ" (အုပ်စုတစ်စု "သင်္ကေတ") ထို select လုပ်ပါ "အခြားဇာတ်ကောင်".
drop-down menu ကိုအပိုင်းအတွက်ပေါ်လာပြတင်းပေါက်ခုနှစ်တွင် 3. "စာလုံး" ကို select « Wind ».
ဇာတ်ကောင်များ၏စာရင်းမှတဆင့် 4. Scroll နည်းနည်းပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်စတုရန်းအတွက်လက်ဝါးကားတိုင်ကိုရှာပါ။
5. သင်္ကေတများနှင့်စာနယ်ဇင်းကို Select လုပ်ပါ "Paste"ပြတင်းပေါက်ပိတ်ပြီး "သင်္ကေတ".
6. box ထဲမှာတစ်ဦးကလက်ဝါးကားတိုင်စာရွက်စာတမ်းမှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 1. "အိမ်" အုပ်စုတစ်စု "စာလုံး" အဆိုပါမှာအသုံးပွုတဲ့ဖောင့်ကိုပြောင်းလဲ « Wind ».
2. က box ထဲမှာလက်ဝါးကပ်တိုင်မှဆက်ပြောသည်ရပါမည်ရာအရပ်၌ဖို့ pointer ကို Install, နှင့်ချကိုင် « ALT ».
2. နံပါတ်များကိုရိုက်ထည့်ပါ «120» အဆိုပါကိုးကားနှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မပါဘဲ « ALT ».
3. box ထဲမှာအဆိုပါလက်ဝါးကားတိုင်သတ်မှတ်ထားသောတည်နေရာကဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်။
သင်ခန်းစာ: ရပ်ကွက်ကို tick အတွက်
တခါတရံမှာလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း box ထဲမှာလက်ဝါးကပ်တိုင်သင်္ကေတထား, တစ်ပုံစံကိုဖန်တီးရန်အဆင်သင့်မဖြစ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တိုက်ရိုက်သင်တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ထားနိုင်သည့်၏အတွင်းပိုင်းသည်စတုရန်း add ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ Microsoft Word ကိုဒီလိုလုပ်ဖို့ developer mode ကို (တူညီ tab ကိုအပေါ်လျင်မြန်စွာ Access ကို toolbar ကိုပြသပေးမှာ) ဖွင့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
1. menu ကိုဖွင့်ပါ "File" နှင့်ကိုသွား "Options ကို".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်ခုနှစ်တွင် 2. ဖို့လမ်းညွှန် "Customize ဖဲကြိုး".
စာရင်းများတွင် 3. "Basic tab ကို" ပစ္စည်းဆန့်ကျင် box ကိုစစ်ဆေး "ရေးသားသူ" နှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ" ပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ရန်။
အခုတော့နှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်ဦး tab ကိုရှိစဉ်အခါ "ရေးသားသူ"သငျသညျထို program ၏အများကြီးပိုကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာမှမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူများ, ကြှနျုပျတို့အစောပိုင်းကအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်ရာဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသော၏ဖန်တီးမှုတွေထဲမှာ။ သို့သျောလညျး, ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော, မနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့စိန်ခေါ်မှုရှိသည်သောမေ့လျော့တော်မကြကုန်အံ့။
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်၌ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသော Create
1. tab ကိုဖွင့်ပါ "ရေးသားသူ" နှင့်အုပ်စုတွင်သက်ဆိုင်ရာခလုတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်း mode ကိုဖွင့် "ထိန်းချုပ်မှုများ".
တူညီတဲ့အုပ်စုသည်2ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒီထိန်းချုပ်မှု box ကို contents တွေကို".
လွတ်သေတ္တာတွင် 3. အထူး frame ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ခှဲခွား "ဒီဇိုင်း Mode ကို"အဆိုပါအုပ်စုတွင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် "ထိန်းချုပ်မှုများ".
သငျသညျတခါစတုရန်းကို click ပါလျှင်ယခု, တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်တစ်ခုကိုအတွင်းပုံပေါ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်သင် box ထဲမှာတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်နေရာနိုငျသညျ့နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပါအဝင် Microsoft Word ကိုစွမ်းရည်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပိုသိတယျ။ အဲဒီမှာကိုရပ်တန့်က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာဆက်လက်နှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤအတူသင်တို့ကိုကူညီနိုင်မထားပါနဲ့။
ဗီဒီယို Watch: How To Download Bs Player Pro Build 1082 With Offical key By Tech2gyan (စက်တင်ဘာလ 2019).